Momba anay - Guangzhou Danye Optical CO., LTD
Guangzhou Danye Optical CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2010, any Guangzhou China, no kalitao avo lenta amin'ny hatsarana tsy misy fandidiana sy ny mpanamboatra fitaovana ara-pitsaboana. Ny orinasanay dia miainga amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, varotra iraisam-pirenena & varotra, aorian'ny serivisy hatramin'ny fampiofanana matihanina;
Danye dia manana ekipa miasa efa za-draharaha, ary ny mpiasan'ny varotra, teknika, famokarana matihanina dia manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy, mba hahafahanay manome vahaolana feno avy amin'ny rindrambaiko, fitaovana, famolavolana vatana, famolavolana firafitra ho an'ireo mpanjifa namboarina izay mila. Serivisy OEM, ODM na mila modely orinasa;
Ny fitaovantsika lehibe dia misy laser 808nm diode ho an'ny fanesorana volo, thermagic RF ho an'ny fanandratana sy fanamafisana ny tarehy, ny teknolojia vaovao 6.78Mhz monopolar RF fanandratana hoditra & fanesorana ketrona, sehatra cryolipolysis 360 ho an'ny fampihenan-tena sy fampiakarana vatana, laser miisa CO2 ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny hoditra sy ny fitsaboana amin'ny fivaviana, diode laser sy q switch laser 2 in 1 ho an'ny fanalefahana volo sy fanesorana ny tatoazy, IPL / Elight OPT SHR ho an'ny fanavaozana ny hoditra, laser laser Q ho an'ny fanesorana ny tatoazy, milina fanamafisam-peo ho an'ny hoditra mangatsiaka, fitaovana multifunctional hamahana ny olan'ny hoditra samihafa, ny rafitra HIFU ary toy izany. amin'ny;
Ny masininay dia CE, patanty, nankatoavin'ny ROHS, ary i Danye dia mpamatsy SGS sy TUV voamarina, manana 11 taona ny asa fanondranana iraisam-pirenena, malaza any amin'ny firenena samihafa eto an-tany ny masinina. Azo atokisana sy azo itokisana isika.
Manolotra serivisy aorian'ny varotra tsara izahay. Ny milina dia mankafy fiantohana maharitra sy fanampiana ara-teknika amin'ny fotoana iainana. Miaraka nefa tsy ferana amin'ireo serivisy manaraka ireto.
1. Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa
2. Fanohanana an-tserasera 24 ora
3. Fizarana maimaim-poana
4. Fanohanana teknolojia horonan-tsary
Amin'ny lalan'ny hatsaran-tarehy dia mifikitra hatrany amin'ny fitsipiky ny "kalitao aloha, serivisy aloha", ary manatsara sy manatsara hatrany ny fitaovana hihaona amin'ireo mpanjifa!
Raha tianao izahay, miangavy anao hiaraka aminay, manantena amin-kitsimpo i Danye fa hanokatra ho avy ny hatsaran-tarehy kanto miaraka AMINAO fatratra!